Soundtrap: Mepụta Onye Ọbịa gị-Na-akwagharị Podcast na Igwe ojii | Martech Zone
Ọ bụrụ n’ịchọrọ ịmebe pọdkastị ma weta ndị ọbịa na ya, ịmara otu ọ ga-esi sie ike. M ugbu a na-eji Mbugharị ime nke a ebe ọ bụ na ha na-enye a nhọrọ otutu uzo mgbe ị na-edekọ… na-ahụ na m nwere ike idezi usoro egwu nke onwe m. Ọ ka na-achọ ka m bubata egwu ọdịyo ma gwakọta ha n'ime Garageband.
Taa, m na-agwa otu onye ọrụ ibe m okwu Paul Chaney na ọ kesara m ngwaọrụ ọhụrụ, Soundtrap. Soundtrap bụ ikpo okwu dị n'ịntanetị maka idezi, ịgwakọta na imekọ ihe ọnụ na ntanetị - ma ọ bụ egwu, ịkọ akụkọ, ma ọ bụ ụdị ndekọ ọdịyo ndị ọzọ.
Trada ụda maka ndị na-akọ akụkọ
Uda olu bụ urukpuru ngwọta ebe ị nwere ike idekọ gị Podcast, kpọọ ndị ọbịa mfe, dezie pọdkastị gị, ma bipụta ha niile na-enweghị ibudata ma rụọ ọrụ na mpụga.
Soundtrap Podcast Studio Atụmatụ
Ikpo okwu nwere desktọọpụ desktọọpụ nke na-enye ụfọdụ n'ime atụmatụ ndị a.
Dezie pọdkastị gị site na transcript - The desktọọpụ desktọọpụ nke Soundtrap nwere nchịkọta akụkọ ọkọlọtọ mana ha agbakwunyela ntụgharị akpaghị aka - atụmatụ nwere ọgụgụ isi iji mee ka ọ dịrị gị mfe idezi pọdkastị gị dịka ị ga-ede akwụkwọ ederede.
Kpọọ ma dekọọ ndị ọbịa pọdkastị - Ebe ọ bụ na mmekorita bụ isi mgbe ị na-emepụta Soundtrap, ị nwere ike ịkpọ ndị ọbịa gị oku na ndekọ oge naanị site na izipu ha njikọ. Ozugbo ha batara, ị nwere ike inyere ha aka ịtọlite ​​ọdịyo ha yana ndekọ ahụ nwere ike ịmalite! Ha ekwesighi ịdebanye aha iji kpọọ ha.
Bugote ọdịyo na transcriptions na Spotify - Nke a bụ naanị ngwa ọrụ na - enyere gị aka bulite pọdkastị na transcripts ozugbo na Spotify, na - eme ka nchọpụta pọdkastị gị na - adịwanye mma.
Tinye egwu na nsonaazụ ụda - Mepụta nke gị jingle na mezue gị mmepụta na nsonaazụ ụda si Freesound.org akụrụngwa ọdịyo.
Bido nnwale ọnwa 1 n'efu nke Soundtrap
Tags: audio imekọ ihe ọnụedezi ederedenchịkọta akụkọdezie ọdịyoọbịa pọdkastịpodcastnchịkọta akụkọPodcast egwuregwuPodcast transcriptsaasutịpị ụdaụda egwuSpotifyndị na-akọ akụkọ